TV Tokyo – Networks – MMANIME
Re:ZERO -Starting Life in Another World- Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu Anime Info Title: Re: Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu Japanese: Re ： ゼ ロ か ら 始 め る 世界 生活 Genres: Psychological, Drama, Thriller, Fantasy Type: TV Status: Finish Airing Episodes: 25 Airing: Apr 4, 2016 to Sep 19, 2016 Season: Spring 2016 Studio: White Fox Duration: 25 min per ep Score: 8.31 Synopsis: သာမန္အထက္တန္းေက်ာင္းသား Natsuki ...
Sleepy Princess in the Demon Castle ဒီ anime လေးကတော့ 2020 ကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ကားလေးပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့အိပ်ပဲအိပ်နေတာလေ အားလုံး comedy, slice of life ကားကောင်းဖြစ်တဲ့ Umaru chan ကိုသိကြမှာပါ ဒီ anime က umaru chan ကိုဖန်တီးထားတဲ့ studio Doga Koto ရဲ့လက်ရာတစ်ခုပါပဲ episode အနေနဲ့ 12 ပိုင်းထွက်မယ်လို့သိရပါတယ် နတ်ဆိုးဘုရင်ကလူသားမင်းသမီးတစ်ပါး Syalis ကိုဖမ်းပြီး သူ့ရဲ့ရဲတိုက်ထဲမှာဖမ်းချုပ်ထားခဲ့တယ် အဲ့ကိစ္စကိုတစ်တိုင်းပြည်လုံးသိပြီး သူရဲကောင်းကဦးဆောင်ပြီးမင်းသမီးကိုကယ်မယ့်အစီအစဥ်ကိုမကြေညာခင်အထိ ပြည်သူတွေစိတ်ထဲမှာခံစားနေရတယ် ပျင်းစရာကောင်းတဲ့ရဲတိုက်ထဲမှာ တောက်ပတဲ့ချပ်ဝတ်ဝတ်ထားတဲ့သူရဲကောင်းစောင့်နေစဥ်အချိန်အတွင်းမှာအဖမ်းခံရတဲ့မင်းသမီးလေးကဘာလုပ်မလဲ လင်းနို့တောင်ပံပါတဲ့ Teddy ဝက်ဝံလေးတွေကကောင်းပေမယ့် အဖမ်းခံထားရတဲ့ရဲတိုက်ကအရမ်းပျင်းစရာကောင်းလွန်းတယ် ဒါကြောင့်မင်းသမီးလေးကအကြာကြီးအိပ်နေဖို့ပဲဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် သူသက်တောင့်သက်တာအိပ်ရဖို့လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေ နေရာတွေရှာဖွေပုံတွေကိုကြည့်ရှုရမှာပါ တော်တော်လေးလဲချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းသမီးလေးမို့လို့ ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် #No one beat me #LCAM Episode 1 Episode2Episode 3
Soul Eater Kishinဆိုတဲ့‌မကောင်းဆိုးဝါးတွေက်ုသုတ်သင်ဖို့အတွက် သေမင်းကိုယ်တိုင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ DWMAဆိုတဲ့ကျောင်းမှာ Makaဆိုတဲ့ကောင်က လာတတ်ပါတယ် အဲ့မှာသူက ဘာတေလုပ်မှာလဲဘယ်သူတေနဲ့တွေ့မှာလဲဟို kishanဆိုတဲ့ကောင်တေကဘာတွေလဲ သေမင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာပါ adventureအသားပေးမျိုးဖြစ်ပီး Big threeတို့နီးနီး(Just နီးနီး)လောက်ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းပါ တွေကိုလက်နက်အသွင်ပြောင်းပြီးအသုံးပြုပီးတိုက်ခိုက်မယ့် ခပ်လန်း"ပေါ" Animeပါ အအားပေးကြပါဦး Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 Episode 13 Episode 14 Episode 15 Episode 16 Episode 17 Episode 18 Episode 19 Episode 20 Episode 21 Episode 22 Episode 23 Episode 24 Episode 25 Episode 26 Episode 27 Episode 28 Episode 29 Episode 30 Episode 31 Episode 32 Episode 33
King’s Raid: Successors of the Will King's Raid: Ishi o Tsugu Mono-tach King's raid က mobile RPG game ကိုအခြေခံထားတဲ့ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်ရာက ဘုရင် Kyle ကနတ်ဆိုးဘုရင် Angmund ကိုနှိမ်နင်းခဲ့ပြီး Orberia တိုင်းပြည်ကိုငြိမ်းချမ်းစေခဲ့တယ် အခုထပ်ပြီးတိုင်းပြည်မှာနတ်ဆိုးတွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင် အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်နေတဲ့ Kasel ရဲ့ကံကြမ္မာပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ် ဒီလိုနဲ့ပညာရှိ Dominicus ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအရ Kasel ကသူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူ Orberia တိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်ပေးနိုင်မယ့် မြင့်မြတ်တဲ့ဓားကိုလိုက်ရှာဖွေရင်းနဲ့ စွန့်စားခန်းတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာပါ #LCAM Episode 1 Episode2Episode 3
Black Clover Black clover ကတော့အခု ခတျေ new generation big 3ထဲမှာ အပါအဝငျဖွဈပွီး လကျရှိရောငျးအားအကောငျးဆုံး manga တှထေဲကတဈခုလဲ ဖွဈပါတယျ black clover authorကိုယျတိုငျက Black clover ကို Naruto ဆီကနေ referenceယူထားတယျလို့ပွောကွားခဲ့ပါတယျ လကျရှိမှာတော့ အပိုငျး ၁၄၃ပိုငျးထှကျထားပွီး ongoingပါပဲ authorကိုယျတိုငျက Naruto one pieceတို့လောကျရှညျအောငျလုပျမညျဟု ပွောကွားထားခဲ့ပါတယျအဲ့တာကွောင့ျ အနညျးဆုံး Naruto နီးပါး အပိုငျး ၅၀၀လောကျတော့ လာမှာပါ ၂၀၁၆ခုနဈက borutoနှင့ျအပွိုငျထှကျရှိခဲ့တာဖွဈပွီး စစထှကျခငြျးတုနျးက ဆိုးရှားတဲ့ animation ဇာတျညှနျးတှကွေောင့ျ မအောငျ မွငျဘဲ တဈနှဈအကွာမှသာ new generation big 3ဟု ပါ လူသိမြားလာခဲ့ပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉြျးကတော့ Clover တိုငျးပွညျကွီးမှာ ဆငျးရဲခမြျးသာမညျသူမဆို မှောျသုံးနိုငျပါတယျ မငျးသား Asta မှာတော့ မှောျမသုံးနိုငျခြေ သူနှင့ျငယျစဉျထဲက ပွိုငျဘကျဖွဈလာသည့ျ yuno ...
Re:ZERO -Starting Life in Another World- သာမန္အထက္တန္းေက်ာင္းသား Natsuki Subaruကတစ္ေန႔မွာ convenient store ကေနအထြက္ အိပ္ခ်င္မူးတူးျဖစ္ေနခ်ိန္ မ်က္စိတစ္မွိတ္ခ်င္းမွာပဲ အျခားကမၻာတစ္ခုကိုေရာက္သြားတယ္.ဘယ္ေရာက္ေနမွန္းမသိေပမဲ့ ၿမိဳ႕ထဲေလ်ာက္သြားေနတယ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ေခ်ာင္တစ္ခုမွာနားေနခ်ိန္မွာပဲ သူခိုးသံုးေကာင္နဲ႔ေတြေရာ.ထြက္ေျပးမယ္ထင္လို႔လား.အံမယ္ကိုပိန္႐ိုးကျပန္ခ်တယ္ဗ်.အဲ့မွာစေတြ႔တာပဲ. သူ႔မွာ ေသရာကျပန္႐ွင္ႏိုင္တဲ့အစြမ္း႐ွိမွန္းသိလိုက္တယ္.ဒါေပမဲ့လည္းEmiliaနဲ႔ေတြ႔ေတာ့မွပဲျပသနာ႐ွင္းသြားတယ္.Emiliaဆိုတာ ဘာညာဘာညာပါ့ဗ်ာ(animeၾကည့္လိုက္ပါ)Subaruက သူ႔ကိုကယ္ခဲ့တဲ့Emiliaကိုေႂကြသြားတယ္.အျမဲတမ္းEmiliaဘက္ကဘဲေနတယ္.ဘယ္သူ႔မွဂ႐ုမစိုက္ဘူး.Emiliaအတြက္ဆိုရင္ အသက္ပါေပးမဲ့အခ်စ္သူရဲေကာင္းေလး(ခဏခဏေသတယ္ ေသေပါင္းလည္းထပ္ေနၿပီ😂)ဒါေပမဲ့SubaruကိုေႂကြေနတာကRem.Rem Subaruကိုဘယ္လိုေႂကြလဲေတာ့ animeေလးကိုၾကည့္ေပးပါဗ်ာ😁.ဒါကေတာ့ Romanceအပိုင္းေပါ့ေနာ္. Subaru ကEmiliaကိုအျမဲတမ္းကူညီတယ္(ခ်စ္တာကိုး)ကူညီလို႔ပဲ ခဏခဏေသတာေလ.အဲ့လိုေသလိုပဲ ေနာက္တစ္ခါရန္သူကိုျပန္တိုက္ရင္ ျပင္ဆင္လို႔ရတာ.Emiliaတို႔ကိုလိုက္သတ္ေနတဲ့မေကာင္းဆိုးဝါးေတြလည္း႐ွိတယ္ဗ်.အဲ့လိုမေကာင္းဆိုးဝါးေတြရန္ကေန အစြမ္းအစမ႐ွိတဲ့Subaruက Emiliaကိုဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ.Subaruကိုေႂကြေနတဲ့ Remကေကာ ဘယ္လိုေတြSubaruကိုအဆံုးတိုင္ထိကာကြယ္ေပးႏိုင္မွာလား?Subaru,Emiliaနဲ႔ Remဆိုရဲ႕ဇာတ္လမ္းေလးကေရာဘယ္လိုျဖစ္လာမွာလဲဆိုတာၾကည့္႐ႈေပးၾကပါဦးလို႔ ဒီတစ္ေခါက္Reviewေရးရတာ လိႈ့ဝွက္ခ်က္ေတြပါတယ္.ဒီanimeေလးက serieသေဘာမ်ိဳးျဖစ္တဲ့အတြက္အကုန္ေျပာလို႔မရလို႔ပါ.ဒါေပမဲ့ဒီanimeေလးကရသမ်ိဳးစံုေပးတဲ့အတြက္ ၾကည့္ေနရင္းမပ်င္းေစရပါဘူး.ဥပမာ Remဖြင့္ေျပာတဲ့အခန္း ေဒါသထြက္ရတာမ်ိဳး(ဘာလို႔လဲၾကည့္ပါ)Emiliaနဲ႔Subaruတို႔ေပါင္းၿပီးတိုက္တဲ့အခန္းတို႔ စသျဖစ္ရသမ်ိဳးစံုပါပဲ.ဒီကားေလးက16+ပါ.ဟိုအခန္းဒီအခန္းေတြပါလို႔ပါ(Ecchiမဟုတ္ပါ။ၾကည့္ရင္းနဲ႔သိလာပါလိမ့္မယ္) အဆံုးထိဖတ္ေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ Crd#ArataKizato Episode 1 to 24
Naruto Shippūden Overview Naruto Shippuuden is the continuation of the original animated TV series Naruto.The story revolves around an older and slightly more matured Uzumaki Naruto and his quest to save his friend Uchiha Sasuke from the grips of the snake-like Shinobi, Orochimaru. After2andahalf years Naruto finally returns to his village of Konoha, and sets about putting his ambitions ...
TMDb: 8.6/10 1456 votes
Soul Eater Not! Action ဆန္ဆန္ေလးနဲ႔ Comedy ႀကိဳက္တဲ႔အိုသာကူေတြအတြက္ ဒီ Anime ဇာတ္လမ္းတြဲေလးကိုညႊန္းေပးပါရေစ။ ဇာတ္လမ္းေလးကဒီလိုေပါ႔။ "ဟ႐ူဒိုရီ"ဆိုတာသာမာန္ေက်ာင္းသူေလးတေယာက္ေပါ႔။ ဒါေပမယ္႔ဇာတ္လမ္းေလးအစမွာပဲ သူမဟာ ခႏၶာကိုယ္ကေနလက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ေျပာင္းလဲလို႔ရတဲ႔ ေကာင္မေလးျဖစ္တယ္ဆိုတာသိလိုက္ရပါတယ္။ သူမမွာဒီလိုလက္နက္အျဖစ္ေျပာင္းလို႔ရတဲ႔အစြမ္းရွိတဲ႔အခါမွာ သူမဟာ DWMA ဆိုတဲ႔အကယ္ဒမီေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို သြားရေတာ႔မွာျဖစ္ပါတယ္။ DWMA ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကသူမလိုမ်ိဳး လက္နက္အျဖစ္ေျပာင္းလို႔ရတဲ႔သူေတြကို ေလ႔က်င္႔ေပးတဲ႔ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးေပါ႔။ ဒါ႔အျပင္ လက္နက္ ကိုကိုင္တြယ္ဖို႔အတြက္ မာစတာေတြလည္းတက္ေရာက္တဲ႔ေက်ာင္းေပါ႔။ သူအဲ႔ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကိုေရာက္သြားတဲ႔အခါမွာ မီမီ-ဆမ္ ဆိုတဲ႔ကိုယ္႔နာမည္ေတာင္ကိုယ္ေမ႔တတ္တဲ႔ေကာင္မေလးနဲ႔ မာနႀကီးသလိုလိုနဲ႔ဟန္လုပ္တတ္တဲ႔ အန္ရ-ဆမ္ ဆိုတဲ႔ေကာင္မေလးနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းစျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ အဓိကဇာတ္ေကာင္သံုးေယာက္ျဖစ္တဲ႔ ဒီေကာင္မေလးသံုးေယာက္ေပါင္းၿပီး ဒီဇာတ္လမ္းေလးကို ဘယ္လိုသြားႀကမလဲ၊သူတို႔ေတြဘယ္လိုအခက္အခဲေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္ႀကမလဲ ဆိုတာကေတာ႔ ဒီဇာတ္လမ္းတြဲေလးကိုႀကည္႔႐ႈၿပီး အားေပးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။(Review by- YounG Z3R0 ) MEGA Links Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode 7
Gundam Build Divers Gundam build driver review Build driver ကတော့our century universeဆိုထဲtimeline ကပါ.our century ဆိုတာကအခု ကမ်ဘာအတိုငျးဖွဈနတောကိုပွောတာပါကြနောျတို့အခု ဖွဈနေ တဲ့အတိုငျးgundam scale တေ manga တနေဲ့ပေါ့ original gundam seriesတှနေဲ့တေdirectly မစပျဆကျနပေါဘူး ဒါပမေယျ့timelineပေါငျးဆုံကgundamတှကေိုတှေ့နိုငျမှာပါgundam fanတှအေတှကျတော့မိုကျတာပေါ့ Our century ဆိုတဲ့အတိုငျးgundamဟာgameတှေscale modelတှနေဲ့ပေါ့ဒီထဲမှာတော့gunplaလို့ခေါျတယျ Dထဲမှာတော့gameတဈခုလို့ပွောလို့ရတယျ Gunplaပွိုငျပှဲတလေညျးရှိတယျ😎 သူငယျခငြျးနှဈယောကျတဈနေ့မှာအဲ့gameကိုစဆော့ပွီးဘယျလိုအခကျအခဲ့တှကြေောျဖွတျပွီးproတှဖွေဈလာမလားစောငျ့ကွညျ့ရမှာပေါ့😁 Zawgyi Build driver ကေတာ့our century universeဆိုထဲtimeline ကပါ.our century ဆိုတာကအခု ကမ္ဘာအတိုင်းျဖစ်နေတာကိုေျပာတာပါက်နော်တို့အခု ျဖစ်နေ တဲ့အတိုင်းgundam scale တေ manga တေနဲ့ပေါ့ original gundam seriesတြေနဲ့တေdirectly မစပ္ဆက်နေပါဘူး ဒါပေမယ့်timelineပေါင်းဆုံကgundamတြေကိုတြေ့နိုင္မွာပါgundam fanတြေအတြက်တော့မိုက္တာပေါ့ Our century ဆိုတဲ့အတိုင်းgundamဟာgameတြေscale modelတြေနဲ့ပေါ့ဒီထဲမွာတော့gunplaလို့ခေါ်တယ် Dထဲမွာတော့gameတစ္ခုလို့ေျပာလို့ရတယ် Gunplaပြိုင္ပြဲတေလည်းရွိတယ်😎 သူငယ္ခ်င်းနွစ်ယောက္တစ်နေ့မွာအဲ့gameကိုစေဆာ့ပြီးဘယ္လိုအခက်အခဲ့ေတြေက်ာ်ျဖတ်ပြီးproတြျေဖစ္လာမလားစောင့်ကြည့်ရမွာပေါ့😁 Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode11 Coming soon Amethyst
Oda Cinnamon Nobunaga Oda Cinnamon Nobunaga Episodes: 12 Status: Finished Airing Aired: Jan 11, 2020 to Mar 28, 2020 Duration: 23 min. per ep. Rating: PG-13 - Teens 13 or older Genre Comedy , Historical, Seinen ,Slice of life Review oda nobunaga လို့ခေါ်တဲ့ ဆာမူရိုင်းတစ်ယောက် သူသေဆုံးခဲ့တဲ့နေရာ Honnoji ဘုရားကျောင်းမှာပေါ့ သူမသေခင် ဆုတောင်းခဲ့တာက ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်ဝင်စားရပါလို၏အဲ့လိုနဲ့နောက်ဘဝမှာ ခေတ်မှီတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာCinnamon ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ခွေးဘဝ ရခဲ့တယ် (Hum?) သူပဲခွေးဖြစ်တာလားဆိုတော့ မဟုပ်ဘူး သူ့အပေါင်းအဖော်တွေလည်း ခွေးဖြစ်ကြတာ သူနဲ့ သူ့အပေါင်းအဖော်တို့က ခွေးဘဝမှာ ပြန်ဆုံကြပြီး ဘာတွေဆက်လုပ်မှာ လဲ ဪ..သူတို့ဆုံတဲ့နေရာက ခွေးပန်းခြံမှာတဲ့ Episode 1 Episode2Episode 3
The Wallflower The wallflower Episode: 25 Genres: Comdey Drama Rrview : Crush ရဲ့ ရုပ်ဆိုးမဆိုပြီး အငြင်းခံလိုက်ရတာကြောင့် ရုပ်ချောတဲ့သူတွေကိုမုန်းပြီး ဂမ္ဘီရလိုင်းကျင့်တဲ့ လူအဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့ Sunako Nakahara သူမရဲ့အဒေါ်ဟာ ချမ်းသာပြီး လှပတဲ့အိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားတယ် သူမရဲ့အဒေါ်ဟာ sunako ပြောင်းလဲသွားပူံကို မကြိုက်လို့ ဉာဏ်နီ ဉာဏ်ပြာ ဉာဏ်ဝါနဲ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါ သူ့ရဲ့လှပတဲ့အိမ်ကို ငှားနေကြတဲ့ ကောင်လေး၄ယောက်ကို တွေးမိတယ် ဒါကြောင့် အဲ့ကောင်လေး၄ယောက်ကို Sunako ကို လှပပြီးရင့်ကျက်တဲ့ မိန်းမအဖြစ်ပြောင်းပေးရင်ပြောင်းပေး မပြောင်းပေးရင် အိမ်လခ၃ဆ တက်မယ်ဆိုပြီး ချိန်းခြောက်ထားခဲ့ပြီး ကမ္ဘာအနှံ့ အချစ်ရှာဖွေဖို့ နယ်ဆန့်ခဲ့တယ် sunako ကို အဲ့ကောင်လေး၄ယောက် ပြုပြက်နိုင်မလား မပြုပြင်နိုင်ဘူးလား ဆိုတာ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြပါ Translator Hori Encoder Aoi Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode 7
Restaurant to Another World Isekai Shokudou Episode: 12 Rating: 7.27 Genres: Mystery,Comedy,Fantasy producer: TV Tokyo,Avex Pictures Duration: 24 min.per episode Review Nekoya လို့ခေါ်တဲ့အနောက်တိုင်းစားသောက်ဆိုင်လေးက Tokyo မှာ အနောက်တိုင်းအစားအစားစတိုင်ကို Japan version နဲ့ပြောင်းချက်ထားတဲ့ ထူးခြားတဲ့ဆိုင်လေးပေါ့ ဆိုင်က အားလပ်ရက်နဲ့ ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ ပိတ်တယ်တဲ့ ဒါပေမယ့် စနေ့နေ့ကျရင်တော့ ထူးထူးခြားခြားဆိုင်ဖွင့်ပါသတဲ့ အဲ့နေ့မှာ လာစားတဲ့သူတွေက လူမဟုပ်တဲ့ တခြားကမ္ဘာက မိစ္ဆာတွေ နဂါးတွေ တခြားတိရစ္ဆာန် တွေ က စားကောင်းသောက်ကောင်းစားဖို့Japanနိုင်ငံက ဒီဆိုင်ကို ကြွလာပါသတဲ့ သူတို့တွေအတွက် အစားအသောက်ဘယ်လိုချက်သလဲ ?ဘာကြောင့်လာစားသလဲ ?ကြည့်လိုက်ကြတာပေါ့ Translated by Hori Encoded by Aoi Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 Episode 12 (End)
When Supernatural Battles Became Commonplace When Supernatural Battles Became Commonplace Anime Title -- When Supernatural Battles Became commonplace Genres -- Comedy, Romance, School, Supernatural Episodes -- 12 Aired --Oct 7, 2014 to Dec 23, 2014 Translator --Zambu Htet ဒီ anime ကို kiss x sis ျပန္တဲ့ ecchi ဆရာႀကီး Zambu htet မွ ဘာသာျပန္ဆို ေပးထားပါတယ္ Review လြန္ခဲ့ ႏွစ္ဝက္ေလာက္ မွာ စာေပအသင္းရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္ေတြ ရုတ္တရတ္ စြမ္းအားကိုယ္စီ ရသြားႀကပါတယ္ ဘာေႀကာင့္ရတာလဲဆိုတာေတာ့ သူတို႕ကိုယ္တိုင္လည္းမသိပါဘူး။ ရရွိတဲ့အစြမ္းေတြကေတာ့ အဖြဲ႕ဝင္ေကာင္ေလးျဖစ္တဲ့ ...
One-Punch Man S2 One Punch Man2Episode 1 Episode2Episode3Episode4Episode5Episode6Episode7Episode 8 Episode9Episode 10 Episode 11 Episode 12 LazyAss
TMDb: 8.2/10 763 votes
One-Punch Man Ep 1 Ep2Ep3Ep4Ep5Ep6Ep7Ep 8 Ep9Ep 10 Ep 11 Ep 12 LazyAss